Sayidku wuxuu ku dhawaaqay in dhamaadka iyo dhacdaba ay iman doonaan | Apg29
Yexesqeel cutubka 7aad, Sayidku wuxuu wax u sii sheegay Yexesqeel oo wuxuu ka hadlayaa wakhti mugdi ah iyo belaayo soo socota. Shil gebi ahaanba aan caadi ahayn, oo kaligiis ah noociisa.
Yexesqeel 7: 5 - Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, Bal ogaada, masiibo baa soo socota, oo masiibo baa ku jirta. Dhammaad baa yimid, dhammaadkii waa yimid, bal eeg, dhammaadkii waa yimid. Waa ay toosaysaa oo adiga ayay kugu soo toosi doontaa. Bal eeg, waa soo socota!
Yexesqeel cutubka 7aad, Sayidku wuxuu wax u sii sheegay Yexesqeel oo wuxuu ka hadlayaa wakhti mugdi ah iyo belaayo soo socota. Shil gebi ahaanba aan caadi ahayn, oo kaligiis ah noociisa. Wuxuu ku dhawaaqayaa in waqtiga dadku waqtigiisu ku idlaado, in maalinta ay dhammaatay oo ay dhammaatay afartii gees ee waddanka. Sayidku wuxuu sheegayaa belaayada soo socota sida seefta, belaayada iyo abaarta. Wuxuu ka hadlayaa xaalad ay quwadda iyo welwelka ka adkaan karaan, halkaas oo gacmaha dadku ku luqluqdaan iyo jilbaha ay u noqdaan sida biyo oo kale. Erayadan looma adeegsan karo oo keliya wakhtiga Yexesqeel, laakiin waa ereyo sheegid ah oo loogu talagalay waqtiga aan ku nool nahay oo aan u dhaqaaqno.
FEMA waxay heshay awood
FEMA waxay u taagan tahay Hay'adda Maareynta Degdegga ah ee Federaalka waana hay'ad dowladeed oo ku taal Mareykanka oo loo diro masiibooyinka iyo / ama dagaalladda. Markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka, dhammaan 50-ka dowladood waxay saxiixeen bayaan madaxweyne oo sheegaya inay ku sugan yihiin xaalad musiibo. Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay mabda'a 'FEMA' inay la wareegtay qaybo ka mid ah ama in ka badan markay tahay go'aammada la-dagaallanka fayraska corona. Waxyaabaha kale oo ay ka mid yihiin, soojeedin ayaa loo sameeyay FEMA si ay ula socoto oo ay u maamusho waxa iyo waxa alaabtu dalka uga baxaan. Taas macnaheedu waa in dhacdooyinka qaaska ah, la wareego awoodda masiirka ee 'FEMA', waddankuna markaa asal ahaan loo beddelo dowlad boolis.
Waxaan hore u qoray qaabka Mareykanku ugu muuqdo inuu u diyaar garoobayo musiibooyinka waaweyn ee dalka ka jira anigoo dhidibada u qaadaya "Xerada Xeryaha", oo ku yaalliin hareeraha Mareykanka, kuwaas oo intooda badani u eg yihiin u fiirsasho ama xeryo xabsi. Maanta way faaruq yihiin, laakiin waxay diyaar u yihiin inay helaan 100,000 oo tobban kun oo qof oo ku sugan xaalad degdeg ah ama xaalad degdeg ah. Su'aashu waxay tahay in xeryahaas mustaqbalka loo adeegsan doono in lagu ciqaabo ama la dilo dadka inta lagu guda jiro fitnada, kuwaas oo aan dooran inay qaataan sumadda bahalka.
Markaan aragno sida dowladaha dowladeed iyo hoggaanka ay u falcelinayaan, waxay si fudud u tahay dib u tababar guud oo ah waxa soo socda. Sida horumarku u dhacayo, waxaan la socon doonnaa sida dalalka loogu beddelo waddamo booliis, halkaas oo sharciyo khasab ah ay ka dhici doonaan, halkaas oo aad fursad ugu heli doonto inaad ciqaabto dadka aan u hoggaansamin sharciyada iyo tallaabooyinka lidka ku ah Masiixiyiinta. Cabsi la mid ah tan ka jirta dadka maanta ayaa aad uga sii badnaan doonta inta lagu gudajiro dhibaatada waxaadna diyaar u tahay inaad waxkasta oo aad nabad ku soo jiidato. Kaliya dadka aan u sujuudin waa dadkan oo loogaga guuleystey Masiixa xilligan jahwareerka badan - halkaasoo aad ku siiso noloshaada dunidan, si aad ugu guuleysato jannada.
Ciise wuu dhow yahay goor dhow!
Dhamaan 50-ka gobol ee hoos imaad ku dhawaaqa musiibada markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka | TheHill